Bumbiro reUS uye Chirevo cheRusununguko izvozvi zvine 'mutauro unokuvadza'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Bumbiro reUS uye Chirevo cheRusununguko izvozvi zvine 'mutauro unokuvadza'
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Hasha dzezvematongerwo enyika dzakashata kuraramisa hakuregerere US Bumbiro, Kuzivisa kweRusununguko uye Bhiri Rekodzero.
US National Archives tags Chiziviso cheRusununguko uye US Bumbiro nemitauro yekuyambira mitauro
Zvinyorwa zvekare zvave kufungidzirwa kuve ne "zvinogona kukuvadza zvemukati".
Vagadziri venhoroondo vanoudzwa kuti vazivise vashandisi nezve presense uye mabviro e "zvinokuvadza zvirimo".
"Anokuvadza Mutauro Alert" ma tag akaonekwa pane US National Archives mapeji ewebhu kuratidza iwo akaongororwa shanduro dzeDeclaration of Independence uye neConstitution. Mavara ekunyevera 'emutauro unokuvadza' anoonekwa pamapeji acho aine zvinyorwa zvekutanga gumi, inozivikanwa seBill of Rights.
Kutanga kufunga nezvevashanyi veNational Archives webhusaiti se prank kana mhedzisiro yekurwisa kwehacker, zvisinei hazvo yanga isiri jee zvachose.
Iyo yekubatanidza pane iyo label inotungamira kuNational Archives uye Records Administration (NARA) chirevo pane "zvingangova zvinokuvadza," zvinotsanangurwa sekuratidzira "rusaruraganda, murume, murume, kugona murume, misogynoir, uye kufungidzira kwevekunze nekufunga" kana kuve "kusarura kana kusabvisa maonero akasiyana siyana nezvebonde, murume kana mukadzi, chinamato, nezvimwe," pakati pezvimwe maitiro.
Vagadziri vemabasa ekuchengetedza vanoudzwa kuti vazivise vashandisi nezve kuvapo uye mavambo ezvakadai "zvinokuvadza zvinhu," kugadzirisa tsananguro ne "mazwi anoremekedzwa" uye voita "kuzvipira kwenzvimbo kusiyanisa, kuenzana, kuiswa, uye kuwanikwa."
Izvo zvaive zvisina kujeka kana iro Bumbiro, iyo Dziviriro yeRusununguko uye Bhiri rekodzero rakanyorwa senge rinogona kukuvadza. Kudzoka muna Chikunguru, panguva yekuverenga kwadzo kwechinyakare kweChiziviso pane gore rekugamuchirwa kwayo - July 4, 1776 - National Public Radio yakawedzera chirevo kekutanga, ichiti "mazwi ari mugwaro anogara zvakasiyana" mushure mekuratidzira kwezhizha rapfuura uye nyika yedu tichifunga nezve rudzi. "
Izvi zvaireva kuratidzira kweBlack Lives Matter kuratidzira kwakatanga muna Chivabvu 2020, mushure mekufa kwaGeorge Floyd muMinnesota, yakakurumidza kunzi nemapoka evanoratidzira kusarura kwemapurisa uye nehurongwa hwese hwezvematongerwo enyika neUS. MaDemocrat Joe Biden naKamala Harris vakatsigira varatidziri; muna Kubvumbi, mushure mekunge mupurisa weMinneapolis abatwa nemhosva yekuponda Floyd, iye zvino Mutungamiriri Biden uye Mutevedzeri weMutungamiri Harris vakarumbidza mutongo uyu uye vakakumbira shanduko muzita reruramisiro yedzinza.
Mune akateedzana ma tweets muna Chikunguru, NPR yakati Chiziviso cheRusununguko chine "zvikanganiso uye hunyengeri hwakadzika midzi," zvichinongedzera kunyanya ku "kusarurana kwevanhu vemuAmerica" ​​- zvingangodaro zvichinongedzera kumutsara we "vasina tsitsi maIndia" vekoloni vakanyunyuta. nezve korona yeBritish.
Svondo 10, 2021 pa 18: 53
im getting tired of this anti racism and wokeness they think our country is racist but it isnt and they think they can discriminate against white people and get away with it is wrong ini ndiri kurwara uye ndaneta kunzi ndiri musaruraganda pasina chandatadza
George Petaki anoti:
Svondo 9, 2021 pa 17: 11
Aya ppl anochema zvese izvi "zvakaipa" zvinhu ndivo vanoshandisa aya mazwi, ma tag, makotesheni, uye zvakadaro muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Leftist liberal morons avo "boo-hoo" vanochema "rusaruraganda" kune wese munhu akavapoteredza, asi vanokundikana kutarisa mugirazi uye voona vechokwadi "vapanduki" vari kukuvadza nyika yedu uye vari, munhoroondo, ivo "vechokwadi rusaruro". Tarisa nhoroondo uye uone kuti madhimoni ari kukonzera mamiriro ezvinhu anotyisa kudaro muUSA.
Svondo 8, 2021 pa 11: 43
Ndivanaani "wokists" vachamuka uye vorega kuyedza kuita zvekare nhoroondo? Kuziva nekucherechedzwa kwe "kudarika" kwekare kunongova izvo uye zvine kukosha apo isu tichiongorora zvakashata zvakapfuura. Nekudaro, icho hachisi pembedzo yekukanganisa nhoroondo!